I-2020 SaaS Churn Rate Statistics | Martech Zone
NgoLwesithathu, Novemba 11, 2020 NgoLwesine, Aprili 1, 2021 UJafar Sadhik
Sonke sivile ngeSalesforce, Hubspot, okanye ImeyileChimp. Bangenise ixesha lokwanda Ukukhula kwe-SaaS. I-SaaS okanye iSoftware-njengenkonzo, ukubeka nje, kuxa abasebenzisi befumana isoftware kwisiseko sobulungu. Ngezibonelelo ezininzi ezinjengokhuseleko, indawo yokugcina encinci, ukuguquguquka, ukufikelela phakathi kwabanye, iimodeli ze-SaaS zibonakalise ukuba zineziqhamo kakhulu ukuba amashishini akhule, ukuphucula ukwaneliseka kwabathengi kunye namava abathengi.
Inkcitho yesoftware iya kukhula nge-10.5% kwi-2020, uninzi lwayo oluya kuqhutywa yi-SaaS. I-SaaS kunye nokusebenza kwelifu kuye kwafumana ukonyuselwa ngenxa yeCovid-19 ene-57% yeenkampani eziceba ukwandisa imisebenzi yazo.
Gartner kwaye UFlexera
Ukukhula kwe-SaaS kunokuchazwa ngenxa yeziphumo ezimangalisayo ezifunyenwe ngokusetyenziswa kwintengiso, impumelelo yabathengi, ukuthengisa kunye nokugcinwa. Amashishini e-SaaS anokuthelekiswa nezityalo. Ukuphila, ukubonelela, ukuvela, ukukhula, kunye nekhontrakthi xa kufika ixesha. Kwaye njengoko ishishini likhula, abathengi baya kwaye bahambe. La maxabiso e-churn anokuchaphazela ishishini lakho kunye nokubeka umda kukwanda kwintengiso kunye nokukhula.
Inqanaba le-SaaS Churn: Icacisiwe
Amaxabiso e-SaaS akhupha imali, beka ngokulula, kwaye ubonise iqondo apho abathengi bakho abakhoyo banqumamisa / bacime umrhumo wabo ngexesha elichaziweyo.
Sisalathiso sendlela otyalwe ngayo umsebenzisi ekunikezeleni ngokuhambelana nokusebenza, injongo, amaxabiso kunye nokuhanjiswa. Ixabiso le-Churn limisela phakathi kwezinye izinto, indlela yakho imveliso iye inxaxheba nomthengi.
Kwaye ukukhula kwe-SaaS, inqanaba lokukhula (ukubhaliswa okutsha, ukuphakama, njl.
Kuba i-SaaS iqikelelwa ukuba iyakhula kwilizwe jikelele, ukugcinwa kwabathengi kunye nempumelelo yabathengi kubalulekile kuzo ukunciphisa amaxabiso e-SaaS churn. Kuba ukoneliseka kwabathengi yenye yezona zinto zahlulahlula phakathi kwenkampani ephumeleleyo kunye nabanye, amava abathengi aba yinto ebalulekileyo kwimpumelelo yeshishini ngokubanzi kunye nokukhula kwenkampani.
Ukugcina uhlaziya kunye neendlela zamvanje kwaye ufunde ukuba ungathintela ntoni, senze uluhlu lwee-10 SaaS Churn Statistics ze2020.
Ungayibala njani iNqanaba leChurn
Ingavakala ilula, kodwa ukubala iNqanaba leChurn yeSoftware njengeNkonzo, kukho izinto ezithile. Ngokulula, i-Churn Rate linani labathengi elishiye lahlulwa ngenani lilonke labathengi ekuqaleni kwexesha elilinganisiweyo… elibalwe njengepesenti. Nantsi Inqanaba leChurn ifomula:
Izinto ekufuneka uzigcine engqondweni xa ubala iChurn:
Kuya kufuneka ubakhuphele ngaphandle bonke abathengi abatsha kwezi zibalo. I-Churn nguthelekiso kuphela lwabarhoxisiweyo nabathengi abakhoyo.
Kuya kufuneka ubale usebenzisa ixesha elifanayo, kodwa oko kunokuba yinkohliso. Mhlawumbi abanye abathengi baneekhontrakthi zobude obahlukeneyo, ulungiselelo lwentlawulo olwahlukeneyo, okanye unikezelo… unokufuna ukwahlula ubalo ngokusekwe kulowo nalowo ukujonga ukuba ingaba ezi mpembelelo ziyaphazamiseka.
Kuya kufuneka uqhubeke ukwahlula abathengi bakho ngomxube wemveliso okanye iphakheji ababhalise kuyo. Oku kuyakukubonelela ngeenkcukacha ezithe kratya malunga nokuba amaxabiso akho okanye iipakeji zemveliso zichaphazele njani ubuqhetseba.
Kuya kufuneka ubale umyinge we-churn yakho ngokusekwe kumthombo wentengiso kunye neendleko zokufumana. Ungafumanisa ukuba inqanaba lokufumana kwakho eyona mikhankaso inenkcitho inokwenza ukuba isicwangciso sokuthengisa singazinzisi kwimpilo yenkampani yakho.
Kuya kufuneka ubale i-churn rhoqo ukuze ujonge imeko yakho kwi-churn kwaye ingaba iyanda (ukugcinwa okungalunganga) okanye ukuphucula (ukuthembeka kwabathengi) ngokuhamba kwexesha.
I-Churn ayisoloko iyinto embi… iinkampani ezininzi ze-SaaS zisebenzisa i-churn ukubuyisela ababhalisi abangenanzuzo ngenzuzo ethe kratya. Ngelixa unokuba nenqanaba elibi le-churn kwezi meko, ishishini lakho liya kuba luncedo ekuhambeni kwexesha. Oku kwaziwa njenge Ingeniso yeNyanga yeNyanga eNgenayo (MRR) Churn, apho ingeniso yakho eyongezelelweyo kubathengi abatsha nabasele ikho ngaphezulu kwengeniso elahlekileyo ngokudodobala nokucinywa.
I-10 SaaS Churn Statistics yowama-2020
I-SaaS churn kunye nexesha lesivumelwano -Iinkampani ze-SaaS ezineemvumelwano nabathengi iminyaka emi-2 nangaphezulu kunokwenzeka ukuba baxele amaxabiso asezantsi e-churn. Izivumelwano ezinde, nokuba zonyaka okanye nangaphezulu, zikhokelele kumanqanaba asezantsi e-churn ngeemodeli zobhaliso zenyanga nenyanga ezifumana inqanaba le-churn phantse ye-14%. Oku kungabalwa ukunyaniseka, Amava omsebenzisi, kunye nempumelelo yemveliso phakathi kwabanye.
Ireyithi yeChurn kunye neNqanaba lokukhula -Iinkampani ezikhula kancinci kunye nokuqalisa zinethuba lokufumana amaqondo aphezulu e-churn. Uninzi lweenkampani ezikhula kancinci, phantse iipesenti ezingama-42, zibona i-churn ephezulu kuneenkampani zokukhula okuphezulu. Oku kunganxulunyaniswa nemveliso, iinzame zokuthengisa, okanye iinkqubo zokuzibandakanya kwabaxhasi.
Inqanaba leMedian Churn yoNyaka -Kumashishini enza imali engaphantsi kweedola ezili-10 ngonyaka, i-20% ye-SaaS churn rate yonyaka. Iikhampani eziphakathi ze-SaaS zilahleka malunga neepesenti ezi-5 ukuya kwiipesenti ezisixhenxe zerhafu yokufumana imali rhoqo ngonyaka. Oku kuthetha ukuba, ngaphezulu kwesibini kwisithathu seenkampani ze-SaaS zazine-7% okanye nangaphezulu amaxabiso e-churn ngonyaka. Kwakhona, i-5-5% ithathwa njenge 'yamkelekileyo churn' kuxhomekeke kubungakanani bombutho.
I-SaaS Churn Rate kunye neNtengiso -Ukuthengisa kunye nobudlelwane kubathengi sisiseko sokugcina umthengi kunye ne-chuck churn. Ngokwe-MarketingCharts, ukuthengisa amajelo kuyeyona nto iphakame kakhulu nge-17% ngelixa umndilili wentengiso ye-11% ukuya kwi-8%. Ngaphakathi ukuthengisa kunenqanaba le-churn ye-14%. Oku kuyaphinda kuqinisekisa ukubaluleka kobudlelwane kubathengi kunye neenzame ezizezakho zokugcina nokwandisa ukunyaniseka kwabathengi.
IiNkqubo zeSelfowuni kunye neRawa yeChurn Rate -Izinga lokugcinwa kwenyanga ngokusetyenziswa kweeselfowuni kwi-41.5% sisityhilelo. Oku phantse kube ngamaxesha ama-4 aphezulu kunamava omsebenzisi ngonxibelelwano lwewebhu ngokwe-Phendula.io. Ii -apps ezisebenzisanayo ezijolise kunikezelo lweemveliso zibe negalelo koku kuncitshisiweyo kwenqanaba lokuhamba.
INkonzo yabaThengi kunye neNqanaba leChurn Ngelixa ama-47% ecebisa ishishini ukuba libonelela ngenkonzo elungileyo yabathengi kunye nempendulo, i-42% ishiye ukubhaliswa kwe-SaaS ngenxa yenkonzo yabathengi engalunganga. Abasebenzisi ngoku bafuna amava ukuba abe ngawanye aququzelela impumelelo yabathengi. Kukho isidingo sokuphucula ukuya kwimpumelelo yabathengi ukunciphisa amaxabiso e-churn.
Inani labathengi kunye namaxabiso eChurn - Phantse iipesenti ezingama-69 zeenkampani ze-SaaS zithatha inani labathengi xa zithelekisa amaxabiso e-churn. I-62% isebenzisa ingeniso njengeyona ndlela iphambili yokuqonda amaxabiso e-churn. Ngaphandle koku, iilayisensi zomsebenzisi zikwayenye indlela yokulinganisa amaxabiso e-churn.
Ukufunyanwa kwabaThengi okutsha kunye neeRhafu zeChurn -Iinkampani zibeka phambili ukuthengwa kwabathengi abatsha ukuze bahlale bekho emanzini kwaye baphucule amanani. Kuphela ngama-59% ereyithi yokuhlaziya abathengi kunye nolwaneliseko njengeyona nto iphambili. Oku kusilela kwempumelelo yabathengi kunegalelo kumazinga aphezulu e-churn. Ukuthengisa kunye nokuthengisa umnqamlezo kunokubakho okuphezulu kolwandiso lweshishini.
Ukulinganiswa ngokukhawuleza kwe-SaaS Uninzi lweefemu ezikhula ngokukhawuleza ze-SaaS zinomndilili oFanayo we-3.9 ukuya kwi-1. Nangona umlinganiso kaMamoon wokuthembisa iinkampani ze-SaaS yi-4, iinkampani zibonise iziphumo ezilungileyo ngokwenza ingeniso elahlekileyo.
Ukunyuka kwamaxabiso eChurn Ngelixa iipesenti ezingama-34 zeenkampani zibone ukwehla kwamazinga e-churn, iipesenti ezingama-30 zixele ukuba amaxabiso abo onyukile. Kananjalo kunokuqatshelwa ukuba uninzi lweenkampani ezixela amaxabiso aphezulu e-churn avelise ingeniso engaphantsi kwe- $ 10 yezigidi.
Okukwintsusa: Yenza intonga yakho ye-SaaS
Kukho isidingo sokuqonda ukuba ukugcinwa kwabathengi, ukuthembeka, kunye nempumelelo zizitshixo ekukhuleni kweshishini nakwimpumelelo. Ngokwenza amava abathengi kwangoko, umntu unokunciphisa amaxabiso e-churn. Kukwabalulekile ukunceda abathengi bakho bazibandakanye ne-SaaS yakho ukuze bafumane ulwazi oluxabisekileyo kwaye bamkele nengxelo yabo yokuphucula amava omsebenzisi kunye noyilo lwemveliso. Ukusombulula iingxaki zomsebenzisi kunye nokulinganisa ukusetyenziswa kunokunceda ukunciphisa amaxabiso e-churn kunye nokukhuthaza ukukhula.
tags: Bala inani le-churnukubala okungalungangaii-saassaas iyalandelaamaxabiso e-saas churnsaas churn mananiskas ratio ngokukhawuleza
Umthengisi wentengiso yedijithali onomdla onolwazi oluvakalayo kumabala afana nezixhobo ze-SaaS, i-CX, amanani e-churn, njl. Ngaphambili, wayesebenzela amashishini aphezulu njengeSportsKeeda kunye neNeil Patel Digital India, kwaye ngoku usebenza eSmartKarrot Inc. Uyakuthanda ukufunda iincwadi ngexesha lokuzonwabisa. kwaye uyayithanda kakhulu imisebenzi ka-Agatha Christie.